စည်းလုံးခြင်းရဲ့ အင်အား: ခေါင်းဆောင် - အပိုင်း(၆)
ခေါင်းဆောင် - အပိုင်း(၆)
ဒီနေ့မှာတော့ ခေါင်းဆောင်မှုကဏ္ဍမှာ ခေတ်နဲ့အညီ လိုက်လျောညီထွေ ကျင့်သုံးရမဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ အကြောင်းနဲ့ မြန်မာပြည်မှာ ရှိနေတဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ အတိုက်အခံ အဖွဲ့အစည်း ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့  အပြုအမှုတွေကို စစ်ဖက်နီးစပ်သူများက နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ် ကြပုံတွေ စာဖတ်သူများအနေနဲ့ မိမိကိုယ်တိုင် ဖြစ်စေ၊ မိမိပါဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းများရဲ့  ခေါင်းဆောင်တွေကို အကြံပြုလိုရင် ဖြစ်စေ ခေါင်းဆောင်မှု အရည်အချင်း မေးခွန်းတွေကို ကျွန်တော် ကိုဖိုးတရုတ်က အပြုသဘော စေတနာထား တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
တိုးတက်မှုကို လိုချင်ရင် ခေါင်းဆောင်မှု ပုံစံကို တသမတ်တည်း ထားလို့ မရပါဘူး။ အစဉ်အလာ ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံ ဟာ ခေတ်နဲ့ မလျော်ညီတော့တာ တွေ့ရပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်မှု ပုံစံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလွဲမှု (Flexibility) နဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ထိန်းသိမ်း ဦးဆောင်နိုင်မှု (Self-monitoring) နှစ်မျိုးအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ Self-monitoring လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ထိန်းသိမ်းတာ တခုတည်းကို မမြင်စေချင်ပါ။ ဘယ်လောက်အထိ လေ့လာနိုင်တယ် (Learn)၊ ဘယ်လောက်အထိ (Adapt) လုပ်နိုင်တယ်၊ အနာဂါတ်အမြင် (Vision) ဘယ်လောက်ရှိတယ် ဆိုတာတွေ အများကြီး ပါဝင်ပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လို့ အရက်မသောက်ဘူး၊ ပုတီးဘဲ စိပ်တယ်ဆိုတာလောက်နဲ့ လုံလောက်တဲ့ အရည်အချင်းမျိုး မဟုတ်တော့ပါဘူး။ တာဝန်ချိန်မှာ အရက်မသောက်ဖို့နဲ့ အားလပ်ချိန်မှာ အရက်သောက်နေတုံး အရေးပေါ် ကိစ္စပေါ်လာရင် အချိန်မရွေး ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်မျိုးလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံကို ကြည့်ရင် အိန္ဒိယနဲ့ ရေရှည်မှာ ပြိုင်ဘက်ဖြစ်လာနိုင်တာာကို သိတဲ့အတွက် Perspiration နည်းနဲ့သွားရင် ဖွံ့ဖြိုးမှု နှေးကွေးတာကို သိလို့ အိန္ဒိယရဲ့  Inspiration ပုံစံကို စပြီး ကူးပြောင်းနေပါတယ်။ ဒါဟာ ခေါင်းဆောင်မှုရဲ့  အမြင်နဲ့ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ရှိမှု၊ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့  ပကတိ အခြေအနေကို သိရှိမှုတွေဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့  စရိုက်လက္ခဏာမှာ Quality of Decision ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်မှု အရည်အသွေးကလည်း အရေးကြီးတာ တွေ့ရပါတယ်။ သိမ်မွေ့တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေမှာ ခေါင်းဆောင်မှု အရည်အချင်းဟာ တော်တော် အရေးကြီးပါတယ်။ စီးပွားရေးထက် နိုင်ငံရေးမှာ ပိုပြီး နက်နဲရှုပ်ထွေးတာတွေကို တွေ့နိုင်မှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်းဆောင် တချို့ဟာ “ငါသိတယ်”၊ “ငါဘဲ တတ်တယ်” ဆိုတဲ့ Ego တွေ တော်တော်များတာ သတိထားမိပါတယ်။ ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နအဖ စစ်အာဏာရှင်တွေမှာရော၊ အတိုက်အခံ အဖွဲ့အစည်း တွေမှာပါ ရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင် တချို့ ဟာ ဒီလို လူတန်းစားမျိုးမှာ ပါဝင်နေတာကို ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာ တွေ့ရှိရပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့  Control များရင် ရလဒ်ကောင်း နည်းပါးတတ်ပြီး ၀န်ထမ်းတွေရဲ့  ပါဝင်မှုများရင် Less Leader Control ဖြစ်ရင် ရလဒ်ကောင်း များတတ်ပါတယ်။ စုပေါင်း ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ အောင်မြင်မှုဟာ ပိုမိုကြီးမားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့  ထိန်းချုပ်မှု၊ ပိတ်ပင်မှု၊ တားဆီးမှု များနေတာကြောင့် ရလဒ်ကောင်း မဖြစ်လာဘဲ တနေ့တခြား အဖက်ဖက်က နိမ့်ကျနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ တသွေးတသံ တစ်မိန့်ဆိုတာဟာ စစ်ရေးအရာမှာ ထိရောက်ပေမဲ့ နိုင်ငံရေးကိစ္စမှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနဲ့ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးဟာ အရေးပါတာကို ယနေ့ စစ်အာဏာရှင်တွေက ပစ်ပယ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့  အတွေးအခေါ်၊ အမြော်အမြင်၊ ဥာဏ်ပညာ အရည်အချင်းတွေဟာ စစ်ဖိနပ်အောက်မှာ ပျောက်ကွယ်နေရပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်ဟာ Stabilizer ဘဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ မူဝါဒ ပေါ်လစီကို မှန်မှန်ကန်ကန် ကိုင်တွယ်သင့်တဲ့အပြင် လုပ်နည်းမှာ ပါဝင် မစွက်ဖက်သင့်ပါ။ နေရာတကာ ပါနေရင် အောက်ခြေက မလုပ်တတ်တော့တာမျိုး ဖြစ်တဲ့အပြင် Idea ကောင်းတွေလည်း ထွက်မလာ နိုင်တော့ဘဲ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်တွေ ကျဆုံးရတာ ဓမ္မတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အများကို လုပ်ပိုင်ခွင့် ပေးမှသာ Brain Storming လုပ်ပေးရာ ကျပြီး အတွေးအခေါ် အသစ်နဲ့ ရလဒ်ကောင်းတွေ ရရှိကာ နိုင်ငံတိုးတက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ဖော်ပြထားတဲ့ ယေဘုယျ မေးခွန်း(၂၀) ဟာ သာမန်ခေါင်းဆောင်ငယ်တွေအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြေကြည့်ပါ။ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့ အသင့် ဖြစ် မဖြစ် သုံးသပ်လို့ ရပါတယ်။ မေးခွန်းများကို ဖြေမည့်သူက အောက်ပါအတိုင်း အမှတ်များကို ပေးသွားရန် ဖြစ်ပါတယ်။
လုံးဝ သဘောမတူ (၁ မှတ်)
သဘောမတူ (၂ မှတ်)
ကြားနေ (၃ မှတ်)
သဘောတူ (၄ မှတ်)
လုံးဝ သဘောတူ (၅ မှတ်)
It is enjoyable having people count on me for ideas and suggestions.
It would be accurate to say that I have inspired other people.
It isagood practice to ask people provocative questions about their work.
It is easy for me to compliment others.
I like to cheer people up even when my own spirits are down.
What my team accomplishes is more important than my personal glory.
Many people imitate my ideas.
Building team spirit is important to me.
I would enjoy coaching other members of the team.
It is important to me to recognize others for their accomplishments.
I would enjoy entertaining visitors to my firm even if it interfered with my completingareport.
It would be fun for me to represent my team at gatherings outside our department.
The problems of my teammates are my problems too.
Resolving conflict is an activity I enjoy.
I would cooperate with another unit in the organization even if I disagreed with the position taken by its members.
I am an idea generator on the job.
It is fun for me to bargain whenever I have the opportunity.
Team members listen to me when I speak.
People have asked me to assume the leadership of an activity several times in my life.
I have always beenaconvincing person.
90…100 - ဦးဆောင်မှု ပေးရန် အဆင်သင့်ဖြစ်
60…89 - အလယ်အလတ်
40…59 - အခက်အခဲများ ရှိသေး
39…Less - အသင့် မဖြစ်သေး
အထက်ပါ မေးခွန်းတွေကို လေ့လာရင် ခေါင်းဆောင်မှု ဆိုတာ အများနဲ့ ဆိုင်တယ်၊ ကိုယ့်ရဲ့  အတွေးအခေါ် အယူအဆ၊ ပုဂ္ဂိလက အရည်အချင်းတွေ ဘယ်လောက်ရှိတယ်၊ အတွေးအခေါ် ဘယ်လောက် အချိန်နဲ့ ထပ်တူကျတယ် ဆိုတာတွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အချိန် 4:38 AM